Puntland oo isha ku heysa maamulka Gobollada Dhexe – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
9th April 2015 A warsame Af Soomaali, Featured 0
Golaha Wasiirada ee Puntland ayaa maanta oo khamiis ah isugu yimid shirkoodi caadiga ahaa xarunta Madaxtooyada ee Puntland, waxaana shir guddoominaayey Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Cali Gaas.
Golaha Xukuumadda Puntland ayaa shirkooda ku soo qaatey arrimaha gobolada dhexe marka la eego maamul u sameynta, muddo la isku hayey halka shirkaasiba ka dhacaayo.
Maamulka Puntland ee Soomaaliya ayaa sheegay inuu horey u caddeeyey mowqifkiisa ku aadan maamul u samaynta gobolada dhexe. Waxaa Xukuumadda Puntland sheegtey in aysan sinaba u oggolaaneyn maamul aan ku imaan nidaam dastuuriyan ah oo khilaafsan habraaca Dastuurka marka la eego dhismaha Dowlad federaal ah oo ka kooban laba gobol iyo ka badan.
Golaha Xukuumadda ee Puntland ayaa guddi heer wasiiro ah u saarey xaaladda gobolada dhexe si ay ula socdaan waxa ka soo kordhey. Gobolka Mudug oo ka kooban 5 degmo ayaa saddex kamid ah waxay ka tirsanaayeen Puntland 17-kii sano ee la soo dhaafey, waxaana Puntland ku adkeysanaysaa in aan sinaba loogu xadgudbi karin midnimadda Puntland iyo halka dadkiisu doorteen in ay ka mid noqdaan 17 sano ka hor iyada oo Soomaaliya wax Dowlad ahba aysan ka jirin.
Dhanka kale Xukuumadda Puntland ayaa ka hadashey xayiraadda Kenya ku soo rogtey dhamaan Shirkadaha Xawaaladaha ee xarumaha waaweyn kulahaa Kenya.
Puntland ayaa sheegtey in dadka Soomaaliyeed dhibaato xoog leh ay arrintaasi ka soo gaareyso, sidaas darteedna ay u saareen guddi heer wasiir ah oo xaaladdaas la socda.
Shirkadaha Soomaalida ayaa si weyn u maalgashtey dalka Kenya, waxaana ay arrintaani araxjab ku tahay ganacsiga Soomaalidu ku lahayd dalka Kenya.
Golaha Wasiirada ee Puntland ayaa sidoo kale ka hadley barnaamij loogu magacdaray bandhigga dhaqanka iyo farshaxanka ee Puntland. Bandhigga ayaa la donayaa in dadka hal abuurka hibada rabbi u siiyey in ay ku soo bandhigaan waxaana uu bilaabanayaa 11 Abril 2015, dhamaan gobolada Puntland ay ka kooban tahay.
Ugu danbeyntii Golaha Xukuumadda Puntland ayaa sheegtey in ay u diyaar garowdey soo dhaweynta Raysalwasaare Cumar Cabdirashiid iyo wefdi uu hoggaaminaayo oo booqasho ku tegaaya Puntland.